यी हुन केटीले तपाईंलाई मन पराएको थाहा पाउने १० लक्षणहरु ! टिप्स | सुदुरपश्चिम खबर
यी हुन केटीले तपाईंलाई मन पराएको थाहा पाउने १० लक्षणहरु ! टिप्स
एजेन्सी : केटीले तपाईंलाई मन पराएको थाहा पाउने लक्षणहरु । लौ है केटा साथीहरु हो बिभिन्न माया-प्रेमका खोज तथा अनुसन्धानको ब्यापक अध्ययन गरी तपाईंहरु माझ यो लेख प्रस्तुत गरेका छौ । भरपुर फाइदा उठाउनुहोस । आफूले मन पराएको केटी रोज्ने र उनैसँग जीवन बिताउने सपना प्राय सबै छोरा मान्छेले देखेकै हुन्छन् । केटाले सकेसम्म केटीलाई आफूतिर आकर्षित गर्न आफ्ना कुरा गर्ने तरिका तथा आफू प्रस्तुत हुने तरिकाका बारेमा सजग हुनु जरूरी हुन्छ । भनिन्छ, महिलालाई चिन्नु असम्भव जस्तै कुरा हो । महिलाका सबै लक्षण तथा प्रतिक्रियाहरु अ’विश्वसनीय तथा दु’र्वोध्य हुन्छन्, जसलाई खुट्याउनै सकिन्न भन्छन् मनोविज्ञहरु ।
त्यसोभए महिलाको भावनालाई कसरी बुझ्ने त ? कोही केटीले आफुलाई मन पराइरहेको छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने ? मनोविज्ञहरुका अनुसार यस्ता केही लक्षणहरु छन् जसका आधारमा महिला आफुप्रति नतमस्तक भएको कुरा पुरुषले ठम्याउन सक्छन् । केटीले तपाईंलाई मन पराएको थाहा पाउने लक्षणहरु यस प्रकार छन् ।
१. तुरुन्त प्रतिक्रिया दिएमा कुने केटीले यदि तपाइँको मोबाइल म्यासेज, इमेल, टि्वट तथा फेसबुक म्यासेजको तत्कालै जवाफ दिन्छिन् । तपाइँको फोन कललाई बेवास्ता गर्दिनन् र फोन उठाउन नपाएमा माफी माग्दै लामो म्यासेज पठाउँछिन् भने बुझ्नुहोस् तपाइँले उनको मन पगालिसक्नुभएको छ ।
४. हात वा जिउ समाउन खोजेमा चाहे तपाइँ कुनै रेष्टुरेन्टमा बसिरहेका होस् वा बाटोमा हिँडिरहेको होस् उनी तपाइँसँग निकै नजिक आउँछिन् र हात वा जिउ समाउन खोज्छिन् । ५. जतिखेर पनि फोन उठाएमा मध्य दिन होस् वा मध्यरात । खाए पिएको समय जे होस् । यदि तपाइँले फोन गर्नुभयो भने उनले जवाफ दिइहाल्छिन् । उनी भोलि बिहान छिट्टै नउठी नहुने छ तर पनि रातभर तपाइँसँग फोनमा कुरा गर्न तयार हुन्छिन् भने त्यसले संकेत गर्छ की तपाइँलाई उनले माया गर्छिन् ।
६. भूपु प्रेमिकाहरुका बारेमा जान्न चाहेम उनले तपाइँका भूपु प्रेमिकाहरुका बारेमा हरेक कुरा जान्न चाहन्छिन् । जसका कारण उनले तपाइँका मनपसन्द कुराहरु थाहा पाउन सकुन् । तर उनले ती भुपु प्रेमिकाहरुको बद्ख्वाइँ गरिरहन्छिन् । उनीहरुको बारेमा कुरा झिकिरहन्छिन् र भन्छिन्, ‘उनीहरुलाई छाड्नाले तपाइँको जिवन राम्रो भयो ।’
१०. तपाईंका हरेक कुराको याद राखेमा उनले तपाइँले भनेका हरेक कुरालाई ध्यान दिएर सुन्ने मात्र होइन तपाइँले उनीसँग गरेका साना भन्दा साना कुराको वृतान्त पनि याद गर्छिन् । चाहे तपाइँले मदिराको न’शामा मद्यरातमा उनीसँग टेलिफोनमा गरेको जन्मदिनको उपहार बारेको कुरा किन नहोस् । ११. अरु केटीको कुरा गर्दा असहज भएमा यदि तपाइँले अरु कुनै केटीलाई इंगित गर्दै त्यो केटी राम्री छे भन्नुभयो भने उनको अनुहार तत्कालै अमिलो हुन्छ ।
उनले त्यसपछि तपाइँलाई लेक्चर सुनाउन थाल्छिन् । एक घण्टा नै किन नलागोस् विभिन्न उदाहरण तथा दृष्टान्त दिएर तपाइँले राम्रो भनेको केटी यस अर्थमा ख’राब छ भन्ने पुष्टि गरेरै छाडि्छन् । आफूले मन पराएको केटी रोज्ने र उनैसँग जीवन बिताउने सपना प्राय सबै छोरा मान्छेले देखेकै हुन्छन् । केटाले सकेसम्म केटीलाई आफूतिर आकर्षित गर्न आफ्ना कुरा गर्ने तरिका तथा आफू प्रस्तुत हुने तरिकाका बारेमा सजग हुनु जरूरी हुन्छ । यसको पुरा जानकारी हामीले माथी दिईसकेका छौ ।thenepalinews.com बाट सभार
काठमाडौँ । छालालाई राम्रो र अनुहारलाई चम्किलो बनाउन व्युटिसियन वा औषधिहरुको प्रयोग गर्न आवश्यक छैन। त्यसका लागि घरमै पाइने केही घरेलु विधि गर्नु भयो...
अ’त्यधिक क’पाल झ’र्ने सम’स्यामा ४ घ’रेलु उपा’य
क’पाल झ’र्ने सम’स्याबाट धेरै मानिसहरु चि’न्तित हुन्छन् । विभिन्न कारणले क’पाल झर्ने सम’स्या पैदा हुन्छ । तर, ग’म्भीर रो’गका कारण क’पाल झर्ने सम’स्यामा बाहेक...
अध्ययन भन्छ, एउटा मानिसको जी’वनको ९ वर्ष मोबाइल हेरेर बि’त्दछ
सायद तपाईं हामीमध्ये धेरै जनाले दिउसो तथा रा’तमा समेत मोबाइल फोन खेलाएर धेरै समय बिताउँदछौँ । आखिर मान्छेले आफ्नो जीवनकालमा ठ्याक्कै कति समय मोबाइल...
अ’नुहारको छा’लाको सबै सम’स्याको एउटै समा’धान– सुन्तलाको बो’क्रा
सुन्तलामात्रै होइन सुन्तलाको बोक्रामा पनि उत्तिकै गुण हुन्छ । विशेषगरी, सुन्तलाको बोक्रा छालाको लागि लाभदायी हुन्छ । यसले छालालाई धेरै समस्याबाट बचाउँछ । सुन्तलाको...
छो’रा हुन्छ कि छो’री पहिलै कसरी थाहा पाउने ? यस्तो भन्छ...
ग’र्भमा रहेको ब’च्चा छो’रा वा हो छोरी ? ग’र्भवतीको शा’रीरिक स्थिति वा अन्य कुनै सं’केतबाट त्यसको छि’नोफानो गर्न सकिएला ? जब तपाईं ग’र्भवती हुनुहुन्छ,...
गाला हेरेरै थाहा हुन्छ महिलाको स्वभाव, कोठी र डिम्पलले दिन्छ यस्तो...
हुन त सबैले मुस्कुराएको राम्रै देखिन्छ तर अझ महिलाले मुस्कान छोडेको चाहिँ गजबै देखिन्छ । प्रसन्न हुँदा महिलाको गालामा लालिमा आउँछ र छालामा एकखाले...
धन तथा आर्थिक समस्याबाट छुटकारा पाउन गर्नुहोस् यस्ता अचुक उपाय !
एक व्यक्तिले धन प्राप्त गर्न हर प्रयास गर्छ किनभने राम्रो जीवन बिताउन र दैनिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न धन हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर कहिलेकाँही...
ब’र्गर भन्दा समोसा खाँ’दा हुन्छ धेरै फाईदा , य’स्ता छन् का’रणहरु
तपाईं स्वा’स्थ्य बिग्र’ने डरले समोसा खानु हुन्न ? यस्तो भइरहेको छ भने तपाईंले यी कु’राहरुलाई दि’मागबाट हटाइदिनुहोस् । पछिल्लो समय जन्क फुडप्रति नेपालीको पनि...